MilagrOS: Obere nkesa nke dabere na MX-Linux 17.1 | Site na Linux
MilagrOS: Desktọpụ nseta ihuenyo
MilagrOS GNU / Linux 1.0 bụ Distro ọzọ na-akwadoghị nke sitere na GNU / Linux MX-Linux 17.1 Distro Project ma dabere na DEBIAN 9 (Stretch). MX-Linux 17.1 wuru na teknụzụ na ahụmịhe sitere na obodo ndị dị na "antiX" Distros na mbụ "MEPIS". Ndi otu sitere na Venezuelan Blog nke Tic Tac Project wuru ya.
Ekwesiri ighota na Distro MX-Linux 17.1 nwere n'etiti njirimara ya kacha mma iji "SysV" karia "Systemd", ichebe nkwado kernel maka kọmpụta ndị nwere CPU ochie (32 Bit), yana maka kọmputa nwere CPU nke oge a (64 Bit).
3 Budata saịtị
4 MilagrOS: MX na-akwadoghị MX Linux Respin (Snapshot)
4.1 Lee ozi ndi ozo banyere MilagrOS 2.2 (3DE3)
MilagrOS GNU / Linux bụ Distro dị ka MinerOS GNU / Linux, nke, dịka anyị sirila mara, site na edemede ọzọ gara aga na BlogỌ dabere na ụdị nke UBUNTU 18.04 maka 64bits, mana na-ebu mmejuputa MX-Linux 17.1 nchekwa na mmemme yana ngwa Systemback iji rụọ ọrụ dị ka Ntọala Ntọala.
Na MinerOS GNU / Linux nwere nsụgharị 2 dị ugbu a: mbipute 1.0 (ISO - 4.7 GB) ka edere ya ọkacha mma na DVD nkịtị wee wụnye ya na akụrụngwa emelitere yana akụrụngwa dị ala na ndị ọrụ na-abụghị ọkachamara na 1.1 (ISO - 7.4 GB) ka edere ya na ngwaọrụ nchekwa USB ma tinye ya na akụrụngwa nke oge a nwere nnukwu teknụzụ yana ndị ọrụ ọkachamara na GNU / Linux Systems.
Ya mere, MilagrOS GNU / Linux 1.0 bụkwa GNU / Linux Distro, mana kpam kpam dabere na MX-Linux 17.1, nke onye mbipute ya bụ 1.0 kwụsiri ike ma na-arụ ọrụ., ndị ISO dị na ya download saịtị, free ibudata, jiri, kesaa, ọmụmụ na-agbanwe.
O nwekwara nsụgharị nwere NON-PAE na PAE cores, na-eji ndozi dị mfe desktọọpụ desktọọpụ XFCE dị nfe na ndabara., ma nwee ngwungwu izugbe bara uru ma rụọ ọrụ nke ọma tinyere nchịkọta nke ngwa nke aka ya maka njikarịcha, nhazi na mbugharị nke Distro n'onwe ya.
Ofụri Esịt wuru na MX-Linux 17.1 dị ka isi distro.
Na nkwado pụrụ iche maka Kọmpụta Ọgbara ọhụrụ (64Bit ISO).
Ike nchekwa nchekwa RAM dị n'etiti 400 na 512 MB mgbe ịbanye.
Ihe kacha mkpa nke 1 GB Ram maka ezigbo buut.
2GB RAM kacha nta chọrọ maka arọ ngwa ojiji.
Nnukwu nkwakọ ngwaahịa ya na nke ọgbara ọhụrụ na-egbochi ya ịchọ Internet ka ọ rụọ ọrụ.
+/- 30 nke mmalite mmalite
Emechie ọnụ ọsọ nke sekọndrị +/- 15, wee mechie ngwa niile.
LightDM dị ka Ndi an-kpọ nbanye Manager.
Otutu nzube: odi nma iji n’ulo na / ma obu office.
Otutu gburugburu ebe obibi: biara na XFCE na Plasma Desktop Environ.
Anụ, obere, enwere ike ịbelata ma ọ bụ dịrị ndụ (Live).
Ìhè, mara mma, na-arụ ọrụ ma sie ike.
Ọ na-abịa na 3.7 GB ISO.
Ọ na-erepịa obere ohere disk: 14 GB ka arụnyere.
Ezubere maka ịmụ na ịrụ ọrụ na igwe ojii na Webapps (Ndenye ibe edokọbara).
Ezubere maka mmụta na ịrụ ọrụ na Ngwuputa Dijitalụ.
Nkwado maka MOTIF Window Manager.
Ọ nwere nnukwu compendium nke arụnyere ngwa nbipute na Multifunctional ọkwọ ụgbọala.
Ọ nwere nnukwu ngwongwo nke ndị ọkwọ ụgbọala Kaadị ikuku arụnyere.
Ọ na-abịa na Kodi Multimedia Center a ga-eji ọbụna dị ka Multimedia Desktop Environment.
Ọ na-abịa na ngwa mweghachi System: Systemback.
Ọ na-eweta ngwungwu ntọala niile (nke) nke MX Linux 17.1 arụnyere
Weta ụfọdụ Digital Wallets arụnyere.
O nwere ụfọdụ Digital Mining Software arụnyere.
Ọ nwere ọba akwụkwọ libcurl3 kama ọ bụ ọbá akwụkwọ libcurl4 nke oge a, n'adịghị ka MinerOS GNU / Linux.
Maka ugbu a ihe nbudata onyonyo ebudatara nke MilagrOS GNU / Linux 1.0 dị naanị na njikọ websaịtị nke enwere ike ịnweta site na ịpị akpaokwu ahụ: «Tic Tac Project | Distros ».
Ozi emelitere: Site na ụbọchị nkwadebe nke edemede a rue taa, - Disemba 2020, Ọrụ ebube agbanweela isi nke MXLinux 17.X a MXLinux 19.X, nke dabere na Debian 10 ugbu a, ọ bụghị Debian 9, dị ka nke gara aga. Ke adianade do, ọ bụ ugbu a ọtụtụ ihe ndị ọzọ zuru ezu na kachasị maka Akụkụ Ngwongwo Crypto. Ọ na-aga maka mbipute 2.2, yana mbipụta abụọ a na-akpọ Alpha (2 GB Lite) na Omega (2.3 GB Full), nke a na-ekekọrịta n'efu na n'efu n'okpuru nkọwa ndị a:
MilagrOS: MX na-akwadoghị MX Linux Respin (Snapshot)
Ma nke a bụ nke gị ugbu a anya maka otu ụbọchị ahụ:
Lee ozi ndi ozo banyere MilagrOS 2.2 (3DE3)
MilagrOS GNU / Linux bụ ọkụ, mara mma, arụ ọrụ, siri ike, kwụsie ike, enwere ike ịhazi, Distro dabere na MX-Linux, nke dị ka nke a, na-abịa na usoro dị ndụ, ma na-abịa na ọtụtụ nchịkọta awụnyere na mbụ. Nke mere na ọ ga-eji zuru okè mgbe ọ na-arụnyere na-enweghị mkpa njikọ anyntanetị nke ọ bụla nkezi ọrụ nwere ike igosi ihe ndị kasị Ugboro na mkpa ọrụ na a Computer.
Ya mere, enwere ike ịsị na Ọrụ ebube GNU / Linux bụ ezigbo ihe atụ ị ga-e imitateomi iji nweta Distro multi-arụ ọrụ na-achọghị ntanetị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ọrụ ebube: Obere Distro dabere na MX-Linux 17.1
Ehihie ọma. M na-ebudata MílagrOs Linux, iji nwalee ya, mgbe oge na-ewe oge nke nbudata na ịwụnye ngwa Mega nke na-enye m ohere ibudata ebe ihe nchọgharị m abụghị Chromium. Ọ bụrụ na ebumnuche bụ ime ka distro gbasaa ma mara ya site n'ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ kachasị ukwuu, echere m na nbudata na Mega abụghị nhọrọ kacha mma. M na-atụ aro ka ị gbalịa ibudata ya site na saịtị ndị dere ma ọ bụ site na peeji nke na-enweghị nsogbu dị ka Mega nke ahụ, ejiri m n'aka, ga-eme ka onye mbido ọ bụla chọrọ ịkwaga site na sistemụ arụmọrụ ọzọ na MIlagrOs. Daalụ.
Zaghachi Gabriel Antonio De Oro Berrío
Enwere m ike itinye ya na Google Drive, mana ịnwere ike ịnwale ya na-enweghị nbudata ma wụnye ya na saịtị a: https://distrotest.net/MilagrOS
Enwetara m ya na m na-eji ya, ọ dị ka ọ dị ebube, mana na mgbakwunye na nsogbu nke ibudata ya na Mega, achọpụtara m na ọ nwetụrụ m ala na-enweghị ike ịgbanwe paswọọdụ Admin ma ọ bụ mgbọrọgwụ ma nwee ike ijikwa okwuntughe abụọ, mgbe nke ọzọ ga -ekwe ka ị na-akọwapụta otu paswọọdụ site na mmalite. M na-ekwusi ike na m ga-etinye ya na saịtị ọzọ nke nbudata dị karịa karịa Mega ma kwe ka ịgbanwe okwuntughe site na mbido, ma ọ bụghị ya, ọ dị ka ọ kwụsiri ike, ngwa ngwa, yana ezigbo ọbá akwụkwọ nke mmemme, ngwa na egwuregwu. na nnukwu uru o nwere bụ na mgbe ị na-ahọrọ asụsụ, ngwa niile na-ewere ya na ịkwesighi ịkwanye nhọrọ asụsụ ọzọ. Ihe ọzọ imezi bụ ntụgharị asụsụ, ọbụlagodi ụfọdụ okwu na-ezighi ezi na-apụta na ntuziaka nwụnye Spanish. Daalụ.
Ozugbo arụnyere na ịgbaso "nkwanye" (enweghị ọrụ) iji debe okwuntughe ndị a tụrụ aro, ị nwere ike ịgbanwe ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji iwu "passwd root" na "passwd sysadmin". Okwu nsụgharị bụ nsogbu na isi MX-Linux, nke na-aga ugbu a site na 17.1 ruo 18. Ọ bụrụ na m mee mbipute 1.1 nke MilagrOS karịa nsụgharị 18, enwere m olileanya na ha edozila "obere nsogbu" ka ọ ghara ịga n'ihu. Ana m ekelekwa gị maka okwu ọma dị na uru ọ bara! Enwere m olileanya na ị ga-enwe mmasị na CPU dị ala na RAM nke ya dị ka arụmọrụ ya ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ya!
Ndewo, enwere m mmasị na distro, ọ bara ezigbo uru na a na-ejikwa ya ọtụtụ ọkwọ ụgbọala maka kaadị wifi. Ihe m chọrọ bụ ịnwe ya na desktọọpụ matte. Na di na nwunye. Kedu ka m ga - esi mee ya ??
Zaghachi Max Sarkus
Cannwere ike itinye ngwa Desktọpụ ọ bụla na-akpaghị aka site na iji ngwa
«Ihe aga-eme» nwere ike arụnyere na-eji ndị na-esonụ iwu:
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji aka gị wụnye nke ọ bụla n'ime ha, mee iwu ndị a
• apt wụnye gdm3 gnome gnome-search-tool gnome-system-ngwaọrụ
• apt wụnye lightdm xfce4 gtk3-engines-xfce xfce4-goodies xfce4-messenger-ngwa mgbakwunye xfce4-mpc-
• apt wunye onye di na nwunye-isi-desktọọpụ-gburugburu ebe obibi-desktọọpụ-gburugburu ebe obibi-desk-ibe
environment-mgbakwunye-mate-menus mate-sensọ-applet mate-system-tools task-mate-desktọọpụ
• apt wụnye cinnamon cinnamon-desktop-environment task-cinnamon-desktọọpụ
• apt wụnye libfm-ngwaọrụ leafpad lxappearance lxde lxde-core lxlauncher lxmusic lxpanel lxrandr lxsession lxtask lxterminal pcmanfm openbox obconf task-lxde-desktop tint2 lightdm lightdm-
• apt wụnye kdm kde-full
• apt wụnye sddm plasma-desktop plasma-nm plasma-runner-installer plasma-runners-
addons plasma-akwụkwọ ahụaja-addons sddm-isiokwu-breeze sddm-isiokwu-elarun sddm-isiokwu-debian-
elarun sddm-isiokwu-debian-maui sddm-isiokwu-maldives sddm-isiokwu-maui
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ gbasara nke a ma ọ bụ isiokwu ọ bụla ọzọ, ana m akwado ka ị gụọ akwụkwọ ọrụ dị na njikọ a: https://proyectotictac.com/2019/01/10/papeles-tecnicos-del-proyecto-tic-tac/